steem-bounty – @mmunited
Network challenge steem steem-bounty steempress
Today I would like to make something special for my Steemit Networking Challenge. This post and bounty is only for steemmonsters users. If you don’t have steemmonsters account please use the following link to sign up. https://steemmonsters.com/ Who is your favourite summoner and why? There are6splinters in the game. They are Fire/Red – …
steem-bounty steemit steempress
Ideas on Steem blockchain #8 – Steem-bounty shout out
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Steem-bount ရဲ့ နောက်ထပ် အစီအစဉ်တစ်ခုအကြောင်းရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းပိုစ့်ကို တော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ For english user please read the post directly using below link. https://steemit.com/steem-bounty/@jmhb85/100-sbd-in-weekly-prizes-with-steem-bounty-lets-ask-some-question Image Source Steem-bounty အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/whatisabountyexactlyexpalinedinmyanmarlanguage-6hkk85k63y လုပ်ရမှာကတော့ မခက်ပါဘူး။ ပိုစ့်တစ်ခုတင်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။ ကိုယ့်မေးခွန်းကို သူက ကြိုက်ရင် upvote ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် ၁ SBD ကနေ ၁၀ SBD အထိရနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာစည်းကမ်းတွေကို ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပြိုင်ပွဲဝင်ရမလဲ သင်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်း ဒါမှမဟုတ် ပုစ္ဆာ တစ်ခုခုကို ပိုစ့်ထဲမှာ …
Steemit Networking Challenge #5
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ ၅ ပတ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမအပတ်ကတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/introductiontooneuponedownsteemitnetworkingchallenge-p9d6fdxu8k အပတ်တိုင်း စနေနေ့မှာ project prometheus ကို updateလုပ်မှာဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Steemit networking challenge ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လူတွေ comment များများပေးလာအောင်လို့ မက်လုံးပေးတဲ့အနေနဲ့ comment ပေးတဲ့သူ ၅ယောက်ပြည့်တာနဲ့နဲ့1 Steem ကို bounty အနေနဲ့ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steembounty အကြောင်းသိချင်ရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ရှုနိင်ပါတယ်။ Sponsor ပေးချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/whatisabountyexactlyexpalinedinmyanmarlanguage-6hkk85k63y မေးခွန်း ဘယ်လို မှော်စွမ်းအားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလဲ။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ Question What is the magical power do you want to possess? and Why? Rules Answer the …
Network challenge steem-bounty steemit steempress
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ စတုတ္ထ အပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအပတ်ကတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/introductiontooneuponedownsteemitnetworkingchallenge-p9d6fdxu8k အပတ်တိုင်း စနေနေ့မှာ project prometheus ကို updateလုပ်မှာဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Steemit networking challenge ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လူတွေ comment များများပေးလာအောင်လို့ မက်လုံးပေးတဲ့အနေနဲ့ comment ပေးတဲ့သူ ၅ယောက်ပြည့်တာနဲ့နဲ့ 0.5 Steem ကို bounty အနေနဲ့ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steembounty အကြောင်းသိချင်ရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ရှုနိင်ပါတယ်။ Sponsor ပေးချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/whatisabountyexactlyexpalinedinmyanmarlanguage-6hkk85k63y မေးခွန်း အရောင်တွေထဲမှာ ဘယ်အရောင်ကို အကြိုက်ဆုံးပါလဲ။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ Question What is your favourite color and why? Rules Answer the above question. Upvote …
Steemit Networking Challenge #3
ဒီတစ်ပတ်ကတော့ တတိယ အပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအပတ်ကတော့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/introductiontooneuponedownsteemitnetworkingchallenge-p9d6fdxu8k အပတ်တိုင်း စေနေနေ့မှာ project prometheus ကို upvote လုပ်မှာဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Steemit networking challenge ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ လူတွေ comment များများပေးလာအောင်လို့ မက်လုံးပေးတဲ့အနေနဲ့ comment ပေးတဲ့သူ ၅ယောက်ပြည့်တာနဲ့နဲ့ 0.5 Steem ကို bounty အနေနဲ့ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steembounty အကြောင်းသိချင်ရင်အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဖတ်ရှုနိင်ပါတယ်။ Sponsor ပေးချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ https://steemit.com/steempress/@mmunited/whatisabountyexactlyexpalinedinmyanmarlanguage-6hkk85k63y မေးခွန်း ဝတ္ထုတွေထဲမှာ ဘယ် ဝတ္ထုကို အကြိုက်ဆုံးပါလဲ။။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။ Question What is your favourite novel and why? Rules Answer the above …